Halkee ayuu marayaa dhoolatuska siyaasadeed ee xildhibaannada Golaha Shacabka |
Halkee ayuu marayaa dhoolatuska siyaasadeed ee xildhibaannada Golaha Shacabka
Muqdisho (estvlive) 20/03/2018
Wali mey saldhiggan oo waxaa saacadihii ugu danbeeyay soconayay Olole siyaasadeed iyo doolatusyo ay sameynayaan xildhibaannada iska soo horjeeda ee ku kala aragti duwan mooshinka laga keenay guddoomiyaha Golaha Shacabka Prof Maxamed Cismaan Jawaari.
Golihii Wasiirradda ugu badnaa ayaa mar kaliya ka soo dhax muuqday kulan maalintii shalay hotelka SYL ee magaalada Muqdisho ku dhaxmarey xildhibaannada saxiixay mooshinka ka dhanka ah Prof Jawaari, waxaana kulankaa ka hadlay inta badan xildhibaannada ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed oo ka dalbaday guddoomiyaha in uu xilka iska casilo ka hor inta aan la gaarin codbixinta, iyaga oo sheegay in xildhibaannada ka soo horjeeda gaarayaan 197 xildhibaan.
Laakiin taa badalkeeda xildhibaannada taageersan Prof Jawaari ayaa arintaa beeniyay iyaga oo sheegay in 184 cod oo kaliya u baahan yihiin si ay xilka uga qadaan Jawaari, sidaa daraadeed haddii ay gaarayaan 197 xildhibaan aysan jirin sabab ay guddoomiyaha ugu dhiir-galiyaan in uu xilka ka dego.
Dhoola-tusyada siyaasadeed ee socda ayaa u muuqda kuwo ragaadiyo howlihii labada gole ee dowladda, madaama xubnaha golaha Wasiirrada iyo xildhibaannada howlmaalmeedkooda caadig ahaa u weeciyeen ololaha la xiriira mooshinka oo dhinac walba ku dadaalayo sidii uu uga takhlusi lahaa dhinaca kale.
Jawaari ayaa meesha ka saaray in uu xilka iska-casilayo ka hor inta aan la gaarin codbixinta mooshinka, madama sida uu hadalka u dhigey uu sharci uga degayo kursiga.
Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ra’iisal wasaare Xassan Cali Kheyre oo guddoomiye Jawaari uu ku eedeeyay in uu gadaal ka riixayo mooshinka isaga laga keeney.
Sidoo kale madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la ogeyn mowqifkiisa ku aadan khilaafkan siyaasadeed ee labada Gole ee dowladda marka laga reebo kulan uu la yeeshay guddoomiyaha Baarlamaanka.
Guud ahaan dadka falaqeeya siyaasada Soomaaliya ayaa qaba in arrimahan dhacaya bulshada Soomaaliyeed soo xasuusinayaan is-qabqabsigii siyaasadeed ee ragaadiyay dowladihii tan hadda koreeyay, waxaana ay intaa raacinayaan in xitaa haddii uu meesha ka baxo ama uu sii joogo Prof Jawaari aysan joogsan doonin mooshinnnadan lana arki doono mas’uuliyiin kale oo dood ka taagan tahay xil-heyntooda.